Kwangathi 1, 2013 by okunikezwayo 44 Amazwana
Eside kangaka, kwakuyithi amaswidi… 🙁
Kweminyaka emine emva kokuya onalo wordpress, futhi 189,795 okulandwayo kamuva, Transposh uzobe esehamba wordpress.org Igumbi.
Ngokusobala, sonke lesi sikhathi widget yethu isixhumanisi indawo yethu, futhi nakuba kungenzeka ukuba isuse kuso, lokhu kwaba ngokumelene neziqondiso wordpress.org.
Lena isiqondiso sokuthi asikwazi ukwamukela, sikholelwa thina udumo ngomsebenzi wethu. Not esingaphansi kuka-Twitter, facebook, noma kunoma iyiphi enye inkampani eyaziwa kahle ukuhlinzeka wesithathu amawijethi ezikhona.
Siphinde Angeke samukele iqiniso lokuthi plugin yethu siyosuswa ngaphandle kwesaziso, futhi ngaphandle isikhathi wenze izinguquko, kwesokudla aphume eluhlaza.
Asikwazi ukwamukela ukuthi imiyalezo ukuthi thina sokubhala ngale isigungu plugin izokhishwa nje ngenxa yokuthi abahloli musa bazenze, noma inqume ukuthi bamelene imithetho ukuthi baye zidalwe ngokwawo. Imithetho bengafuni ukuba kabusha.
Bakhululekile ukuba enze noma isiphi isinqumo bathanda, phela, ayo Ukubamba yabo kanye imithetho yabo. Awukwazi indiva leso, Ngenhlanhla ngokwanele singenayo abamukele.
Uma ufuna akhononde, musa akhononde lapha, zama futhi akhononde phezu izinkundla, kodwa Ukuqagela wami ukuthi uyobe lwentiwe, wordpress.org akuyona intando yeningi, futhi akuyona GPL indawo okushiwoyo, konke kumele kube khona mahhala, in izindleko, futhi enkulumweni, yisona sizathu sakwazi amathani plugin okhubazekile kuphela Anjengesibani ukukhuthazwa ukuze inguqulo pro. Lokhu kubuye yiziphi basikisela ukuthi senza nge Transposh. Futhi singazi like it, akukho nelilodwa bit.
Uma inguqulo esilandelayo uyoke ukulayishwa kulelo indawo, kuyoba version ekhubazekile, (ngaphandle links here, ngokuqinisekile) hhayi version ezisebenzisekayo kunazo. Inguqulo yakamuva (ezingekho sikazwelonke) kuyothathwa ngakhonza khona lapha kwi- ikhasi thwebula. Ukuze thina manje kufanele wengeze indlela update.
Khululeka ukuxoxisana lokhu okushiwo lapha.
Wordpress.org eside kangaka, nokubonga ngakho konke izinhlanzi.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: wordpress.org
Kwangathi 1, 2013 at 11:42 at the
ukuthi nabulungisa. Wena kwaba isizathu esenza i wafika wordpress. Ngidumele ngempela omengameli wordpress. Wena akafuni nje isixhumanisi esisodwa ezincane.
Kwangathi 1, 2013 at 3:48 pm
Well, Ngithemba wena okwazi ukuzigcina zisebenza.
Mhlawumbe ungaqala umkhankaso ukutshela WordPress sonke abajabuli ngakho. Ngaqala ngokusebenzisa WP ikakhulu ngenxa plugin yakho.. kungcono inzuzo enkulu SEO & izixhumanisi ku-Google. Ingihlabe a wewebhusayithi 17 iminyaka futhi ukuze uthole kimi ukuze uyeke ukusebenzisa Dreamweaver & ukushintshela ku-WP.. kwakungenxa yokunithanda Transposh. 🙂
Kwangathi 1, 2013 at 5:43 pm
Siyabonga ngamazwi anomusa, ungathatha lokhu izinkundla wordpress, futhi ake omengameli ukwazi, kodwa angikholelwa ukuthi lokhu kuzosiza kakhulu.
Ngicabanga non isixazululo wordpress uzobe ekhuphuka isheshe manje.
Kwangathi 1, 2013 at 5:34 pm
Wow yilokho sad kangaka, Singazifundaphi akhononde??
Kwangathi 3, 2013 at 8:27 pm
Ungase akhononde phezu izinkundla wordpress, kodwa angicabangi ubani uyolalela.
Kwangathi 1, 2013 at 10:48 pm
Well lokhu kuyizindaba ezimbi ngempela. Bengingacabangi ukuthi iqembu WordPress iphathwa Onjiniyela plugin ye kanje. Badinga ukuba aphinde acabange izenzo zabo. Njengani wathi, isixhumanisi angasuswa nokuthi eyayingenziwa isikhathi eside manje. Yini inkinga? amaphuzu akho ezingaphezu kuka evumelekile futhi mina angisebenzisanga plugin yakho ku eziningi amasayithi ami, okuyinto ungingenisile eziningi traffic xaxa kanye anda amasayithi lokungcolisa ku-Google. Mina emuva guys kule.
ingane Themer uthi
Kwangathi 2, 2013 at 9:09 pm
Awu okungukuthi nje ezimbi. Angisitholi lokho inkinga kuba. Ngiyajabula ukuthi basaqhubeka ukunikela i-plug njengo ngiyisebenzisa kwi amawebhusayithi ambalwa.
uFrancois Lachance uthi
Kwangathi 3, 2013 at 3:16 at the
WordPress wesabeka,into kuphela ezenza wordpress ezinhle emphakathini kunjiniyela sengathi umfana sika,ababeka eziningi umzamo ngoba akukho mali futhi kuncane kakhulu recognition.You guy usebenzile kakhulu nale i-plugin futhi sethemba ukuthi izoqhubeka yenza kanjalo ngisho nalapho that.Best inhlanhla
Kwangathi 3, 2013 at 3:34 pm
Vumelana uFrancois. WordPress wesabeka ngaphandle onjiniyela abafana nawe.
Kwangathi 4, 2013 at 2:01 pm
i think ukuthi lo mthetho wordpress iwukuba ukuvimbela google penguin penality bese ugcine kule sayithi kusuka isigwebo.
Kwangathi 4, 2013 at 2:20 pm
Umbono ezithakazelisayo, kodwa mina into esikwazi ngempela ukusingatha google ngaphandle wordpress.org patronization, futhi okunye – ke uvumelekile ukuba abe isixhumanisi amawijethi akho, cela facebook, Twitter, sharethis(ikhasi esheshayo isikhundla 10), nabanye abaningi
Ana Kelly uthi
Kwangathi 5, 2013 at 9:44 pm
Ngiyazisola kakhulu ukuzwa Bengilokhu usebenzisa plugin yakho iminyaka hhayi futhi ngiyamthanda it….
Ngithemba wena Silondoloze ke.
Kwangathi 6, 2013 at 12:42 pm
Ngingathanda ukukutshela ukuthi mina ukusekela ngokuphelele isinqumo sakho 🙂
Kwangathi 8, 2013 at 2:43 at the
Ukuze irekhodi, ubhekene kahle avunyelwe kahle ukuba isixhumanisi ku iwijethi yakho. Imithetho ku WordPress.org sibeke kuphela isixhumanisi kumelwe kube Isixhumanisi sokungena, hhayi omunye ukukhetha ukuphuma.
Wamukelekile ukuba plugin yakho ku WordPress.org lapho unquma ukuthi ufuna ukusigcina ukuthi ngomthetho othile.
Kwangathi 8, 2013 at 11:35 pm
Ngingu ukhululeka isimo njengoba manje. Angizange zisebenzisa ukuba abe “Ngenjabulo amandla yi- WordPress” emakhasini ami, okuyinto ngephutha iza isihloko ngibekile (futhi ngicabanga themes okuzenzakalelayo kakhulu has it, angalukhethi). Lokhu ayisekho kunjalo, ngoba ngingumuntu ingasaphathwa ngokuba kuleso.
Uma lo mthetho uzobe uhlaziywe (ungafunda abasebenzisi amazwana ambalwa lapha, kuphathelene lokhu, ngokuba ukhululeka ngalokhu, Ebala, njll) Mina sizocabangisisa.
Ngiphinde bakholelwa ngokuqinile ukuthi ukuvala plugin ngokuthile bekulokhu khona 4 kweminyaka, okuyinto hhayi enkulu nokuvikeleka hole is Leso senzo esingalungile. ngenyanga kuphela edlule Ngangineminyaka kancane ngaphandle kwe-intanethi, futhi cishe ngabe bengakwazanga yokusingatha lokhu isikhashana ezinhle. Angazi basikisela ukuba uthathe isikhathi sakho sokuba ngiphinde ngicabange wathi inqubomgomo (ukunikeza isaziso, abanye esibekelwe ezinengqondo, noma yini). Lokhu Asikaze udaba ezibucayi ezifana, ukuthi kudingeka ukusetshenziswa force anjalo.
Nokho, siyabonga ukuzimisela kwakho, futhi isikhathi sakho, Ngethemba Sizohlangana esikhathini esizayo emigomeni kangcono.
mr green uthi
Kwangathi 8, 2013 at 12:50 pm
(Wamukelekile ukuba plugin yakho ku WordPress.org lapho unquma ukuthi ufuna ukusigcina ukuthi ngomthetho othile.)
Sibonga u-Otto ukuba kube khona nekucacisa
Ofer ukuthi izindaba ezinhle Siyakuthanda yakho(yethu) Xhuma
Transposh kumelwe sibe siphila
Wolfgang Bloomfield uthi
Kwangathi 8, 2013 at 10:20 pm
Sawubona, Ngangifuna ukuba abonge kakhulu Transposh i-plugin, kungcono ithuluzi elikahle, Mina uyilande kuyiwebsite yakho, futhi ngiyaqhubeka nokunihlukanisa ngeqholo ukubonisa isixhumanisi sakho.
Angikwazi ukuthi kungani ziye ngamnyama, njengoba ama-plugin abaningi babe izixhumanisi indawo yabo, akukho lutho olungalungile nale njengoba kuyinto plugin khulula, ngakho kufanele okungenani uthole isixhumanisi kuwo.
Niels uJakobe uthi
Kwangathi 9, 2013 at 10:56 at the
Siyabonga umsebenzi wakho – Ngiwuthanda plugin yakho, futhi ngiyethemba nawe Izobuya ku WordPress ngokushesha. Okwamanje, kanjani mina ubuyekeze okufushane umnyuziki? (Ngidinga nezinye amawijethi kuka okuzenzakalelayo) Kufanele I khipha i-plugin WP, bese ulanda + ufake i-plugin kusuka thwebula esigabeni sakho? Noma ingabe ukuthi ukusula zonke izinguqulo yami yamanje?
Kwangathi 9, 2013 at 1:05 pm
Lokhu ngeke ukusula ukuhumusha kwakho, indlela aphakanyisiwe izosebenza. Kukhona enye indlela esingathola Nokho
1. Thuthukisa kusuka wordpress.org enguqulweni 0.9.3
2. Iya izilungiselelo isheke “uthuthukela okufushane umnyuziki”
3. Hlola ngcono futhi (ongase ube ukuphoqelela lokhu)
4. Thuthukisa ku-okufushane umnyuziki (okwamanje 0.9.3.1)
Kwangathi 9, 2013 at 2:23 pm
Ngiyabonga kakhulu – Ngangivame isiphakamiso sakho lokugcina, futhi lokho kwasebenza omkhulu!
Kwangathi 9, 2013 at 2:45 pm
I ngengozi ethuthukisiwe ukuze 0.9.3 nge Igumbi wordpress, kodwa manje ulahlekile amafulegi. Ngakho ukukhishwa futhi ulande inguqulo kuyiwebsite yakho. I-Plugin ngeke efakwe, ke uthi akukho-plugin elitholakele. Futhi bheka ngitheza ulahlekile Ithuluzi yakho yokuhumusha kwisayithi yethu.
Kwangathi 9, 2013 at 3:18 pm
Ingabe uhlole le, Nokho, sicela ufunde nezinye amazwana wami sendlela uthuthukise kusuka onalo.
Kwangathi 9, 2013 at 3:29 pm
Hi, siyabonga impendulo yakho. Lapho Ngahlola emuva ikhasi lakho thwebula Ngabona 0.9.3.1 isixhumanisi. Kwadingeka ukususa amafayela kusuka 0.9.3 bese ulufaka 0.9.3.1. It usebenza emihle manje, nge amafulegi abuyiselwe. Ngiyabonga kakhulu, futhi Ngiyazisola kakhulu isimo nge WordPress.
IWebsite yethu zibhebhetheka iZwi likaNkulunkulu emhlabeni jikelele, futhi ngifuna ukuba nazi ukuthi ukuhumusha injini yakho ayincenye imiphefumulo abasindiswayo.
Kwangathi 13, 2013 at 5:21 pm
wordpress akunakuba multi ulimi CMS ngaphandle Transposh! ziningi translation-plugin for wordpress kodwa bonke bangabafundi engenamsebenzi 😀 Ngijabule kakhulu ngokusebenzisa i Transposh nokusiza ngoba Persian ukwesekwa ulimi. 🙂
Kwangathi 18, 2013 at 11:38 pm
Hey Ofer, wena yayo ukuthi ubani 🙂
Vele ukukwazisa ukuthi nenkinga yami zase zihleliwe lapho mina ilayishwe kabusha inguqulo elungisiwe usufaka iseva ngaleso sikhathi, hhayi ukuthi kanjani noma ukuthi kungani, kodwa fixed it.
Manje ngiyabona ukuthi wayesho wena-plugin yakho kuyasuswa kusukela WordPress, Okubuhlungu ngempela ngaleli, Ngicabangan zombili izinhlangothi kufanele axazulule futhi ukuhlangabezana indlela nengxenye kule nokungaqondi, ngenxa yawo wonke umuntu.
Ngisanda kunguqulo yakamuva, ngakho kuze kube manje ezinhle, uzoqapha izibalo nomthamo enethemba udaba sangaphambilini yamabhuku abuyisa.
Siyabonga ngokugcina Transposh uyaphila.
Kwangathi 19, 2013 at 12:04 at the
Happy ukuzwa inkinga yakho esehambile, abafisa wena inhlanhla esikhathini esizayo 🙂
Kwangathi 27, 2013 at 9:18 at the
Ngiyabonga kakhulu ngokuba Transposh plug-in. Umthetho WordPress akuhlale kuwubulungisa. Angivumelani neze ngohlangothi lwakho. Ithuthukele okufushane umnyuziki ngeqholo ukubonisa “elihunyushwe Transposh” isixhumanisi.
Yakho-plug-in iyona elula kunazo ukusebenzisa.
is i-plugin sisasebenza izwi cindezela webhusayithi osevele efakwe i-plugin, ungase wayengenza isixhumanisi thwebula kusukela repo un olusemthethweni…?!
Ukulanda ku onalo wordpress kuholela lapha, ungabheka ukulanda okufushane umnyuziki, wenze ukuthuthukiswa, kungenjalo ungase uvakashele ikhasi thwebula lapha.
Ilanda isibuyekezo kusukela http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
Ukulanda kuhlulekile. Kwenqatshelwe
Okuthile ku-server yakho kungenzeka ekuvimbeni lo, sicela uzame ukulanda ngesandla ubone ukuthi uyakwazi ukufinyelela ifayela
Ngiyavuma. WordPress Staffers, kuze kufike i uke waqaphela, ngempela wenza umsebenzi ezimbi kakhulu.
Bona susa iforamu yakho uphendula nje ngoba ufuna ukuba 'Okokuqala’ ukuphendula noma ukunquma ukuthi izimpendulo zakho kungukuthi ukuqedela (i kungakwenza ube 2 amagama, kodwa i uthanda hhayi) futhi ufuna ukunikeza amasevisi abo siqu ikhokhwe ngokuxhumanisa amaphrofayli babo bomsebenzi (yebo ..). Lona kuphela ohlangothini black WordPress, futhi ngethemba ukuthi lokhu siyoshintshwa..
Dave Main uthi
Yazi ukuthi usho ukuthini-plugin mayelana ngobugebengu ukugqugquzela izinguqulo pro. Omunye izwi kahle ke – ezidabukisayo.
Ingabe ozithandayo kusayithi lakho. Ingabe lokhozi. Umhumushi Mangalisayo.
Ngemva umhumushi wakho bonke abanye akuzona ngisho 2nd engcono.
Siyabonga ngamazwi akho hlobo
Ubukhulu bomsebenzi ukuthi nina bafana baye ayifake le-plug-in elishaqisayo.
Angazi abasebenzela izinhlangano ezingenzi nzuzo kwezempilo futhi angikwazi ukutshela ukuthi ingakanani yakho-plug-in aye wasisiza ngayo ukukhulumisana labantu bethu Hispanic.
Vele ungene futhi ukuhumusha ethu kuhle.
Bravo abangane bami… ke uhambe kabi mfana wami indlela WP uye wenza kwaba nzima ngawe ukuba akhuthaze wena.
I uzobe ukuncoma, ngokuqinisekile. Izwi lomlomo ngezinye izikhathi ukukhuthazwa engcono.
Bogdan Storm uthi
December 31, 2013 at 2:47 at the
Sicela musa ukushiya le ensimini bese ugcine Transposh uyaphila.
Uma ufuna sikwazi ukukhuluma okwenza kube inzuzo futhi ngizokusiza imibono mayelana ukuthi.
Awudingi iwebhusayithi WordPress ukuthuthukisa umsebenzi wakho.
Gcina isimo sokulindela okuhle UP masikhuphuke ukukusiza.
Siyabonga umsebenzi ophawulekayo nokwenza plugin yakho omunye best Sengike ngakubona kusukela … wake.
Ngizobuya bayokujabulela akhokhe ukugcina ukwesekwa kuso.
Hey, I LOVE ukuphawula kwakho kusayithi WP.org lapho plugin yakho ithole ukukala inkanyezi eyodwa. uthando lwakho lwe okwenzayo kubonakala kula amazwana. Kepp @ ​​ke.
Esisha Fan 🙂
Jakobe Hilliard uthi
I Mods at wordpress kufanele ngempela aphinde acabange lokhu travesty yokucabanga. Njengoba aveze… NJALO inkinobho share isixhumanisi kusayithi yomunye. Ama-plugin facebook ichaze ezifana… Ungalokotha kanjani ZAMA ukuhlanganisa NGAPHANDLE WORLD KUKA-GOOGLE ekuhumusheni EVERYPAGE!!!
The Bee uthi
guys “umsebenzi omuhle!” Ngiyakuthanda plugin yakho futhi ngiyamthanda isimo sakho sengqondo ukuze uyasukuma ukuze okulungile!
Wordpress bekungeke kube wordpress ngaphandle ama-plugin amangalisayo efana neyakho. Njengani wathi Facebook, Linked Ngo, Twitter, -Google…bona boke bathole iinqetjhana ukugcina isixhumanisi emuva kungani hhayi wena?
Ngingu 100% emva kwakho, Ngiwabonakalisa plugin yakho futhi Ngiwabonakalisa isixhumanisi sakho! Credit ufanelwe ukuba anikwe lapho credit kungenxa. Ningiphathe ngokwanele ukuvumela abantu abaningi kangaka besebenzisa plugin yakho futhi wena ufanelwe zonke kancane ngoba! It Okungimangaza ukuthi abantu abaku-wordpress abakwazi bakwazisa kakhulu ukuzikhandla eliphuma bayenza yaba into efana lokhu. Wena ungacabanga abo bonke abantu, beyiyoqonda ukuthi iningi. Phela, WordPress izinzuzo umsebenzi wakho, bonke abasebenzisi WordPress bayazuza umsebenzi wakho, ngakho…kungani wena? Ngizokwenza ngeqholo ukugcina plugin yakho kusayithi yami isixhumanisi emuva! Ngizokutshela bonke abantu engibafundelayo ukwenza okufanayo. Wena bafanelwe ngaphezulu. Long intando yeningi bukhoma!!!! 🙂
Nhlobo sivumelana nako konkhe okushoyo, The Bee! Ngiyakuthanda sengqondo Transposh sika kakhulu …futhi mina nakanjani thanda le plugin brilliant okuyinto Ngiye kuphela nje efakwe futhi okusebenza kahle!
Sales Tax, Ngu Transposh, Angibonanga noma iyiphi inkinobho umnikelo Paypal kuphi?? Ngicabanga udinga omunye 🙂 …futhi sibonga kakhulu lokhu plugin amahle!
noma najeb uthi
February 28, 2015 at 11:28 at the
thats ngokungafanele. lokhu plugin yikona okungcono kimi am gnna qhubeka usebenzisa noma kunjalo u guys dont kudingeka wordpress, futhi u kwesokudla kufanele appreiate umsebenzi ur nabo baxwayisa u ngaphambi kokuba lokho, Thats ezimbi ngempela
Ethan Sanabria uthi
Well lokhu sucks. Ngiyithanda ngempela le-plug-in! Ukuze inkampani ufuna ukuba sandise zibe Latin America, Transposh baba ingxenye ebaluleke kakhulu yobufakazi uhlelo. Ngingamchazela ngenjabulo yokuyikhokhela!
esidumazayo kakhulu, WordPress!!!